सरकारले वाइडबडी मात्र हैन, देशै डुबायो « GDP Nepal
सरकारले वाइडबडी मात्र हैन, देशै डुबायो
Published On :5June, 2019 9:45 am
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व मन्त्री रमेश लेखकले वाइडबडी मात्रै नभएर यो सरकारले देश नै डुबाउन लागेको गम्भीर आरोप लगाए ।
उनले भने–देशको वाईडबडी नै डुब्दैछ, सयमै यसबारेमा चेतना जाग्न जरुरी छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट अदुरदर्शी र भ्रमपूर्ण रहेको पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले भने,‘सत्ता पक्षका साथीहरुले बजेट सुन्दर छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरुले यो भन्नु त स्वभाविक नै हो । तर, सरकारले जुन उद्देश्य र नारा लिएको छ, यो उद्देश्य पूरा हुँदैन । यो बजेटले सरकारको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।’
वर्तमान सरकारले विकासका कुरा सबै विदेशीलाई जिम्मा लगाएको उनको आरोप छ । उनले भने,‘सरकारले विकासको कुरा उधारो गरेको छ । यही तरिकाले समृद्धि आउँदैन ।’ वर्तमान सरकारले साँढे दश महिनामा ४४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको भन्दै यही तवरले कसरी समृद्धि आउँछ ? भन्दै लेखकले प्रश्न समेत तेर्साए ।
नेता लेखकले संघीय सरकारले सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशलाई पुरै बेवास्ता र ठगेको पनि आरोप लगाए ।
फरक प्रसँगमा उनले नेकपाका अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय बाहिर आएकोबारे टिप्पणी गर्दै भने,‘जुन ढंगले यो विषय आएको छ, यसले चाहीँ स्थिरताको नारा, विकास र समृद्धिको नारा जनतालाई सुनाउन व्यर्थ शब्दावली राखिएको पुष्टि गरेको छ ।’
तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई उनले ओली र प्रचण्डबीचको भागबण्डाको संज्ञा दिए । मुलुकमा पछिल्लो समय व्यक्ति केन्द्रित राजनीति सुरु हुन थालेको पनि उनले जिकिर गरे ।
काठमाडौं । नेपालमा चिनियाँ नागरिकले कानुन उल्लंघन नै गरे पनि उनीहरुमाथि कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार सामान्य कुटनीतिक मर्यादासमेत बिर्सेर आफूलाई पदबाट हटाउन भारतले
काठमाडौं । संघीय संसदमा मधेशी मूलका केही सांसदहरुले हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरेपछि त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाई
भारतको आरोपः नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् !
काठमाडौं । भारतले नयाँ नक्सासम्बन्धी नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित नभएको जिकिर गरेको